March 8, 2020 - Myitter
လူတွေ ပြင်ဆင်သင့်နေပါပြီ ။အနယ်နယ် အရပ်ရပ်က ဘုရားပွဲတွေ…အခြား လူစုလူဝေးတွေအားလုံး ရှိုးပွဲဘာပွဲညာပွဲတွေ….ရပ်သင့်နေပါပြီ
လူတွေ ပြင်ဆင်သင့်နေပါပြီ ။အနယ်နယ် အရပ်ရပ်က ဘုရားပွဲတွေ…အခြား လူစုလူဝေးတွေအားလုံး ရှိုးပွဲဘာပွဲညာပွဲတွေ….ရပ်သင့်နေပါပြီ လူတွေ ပြင်ဆင်သင့်နေပါပြီ ။ အနယ်နယ် အရပ်ရပ်က ဘုရားပွဲတွေ… ရန်ကုန် မြို့ထဲကမြို့နယ်တွေရော …ဆင်ခြေဖုံးဘက်မှာပါလုပ်နေတဲ့ တရားပွဲတွေ .. အခြား လူစုလူဝေးတွေအားလုံး ရှိုးပွဲဘာပွဲညာပွဲတွေ….ရပ်သင့်နေပါပြီ ။ ကျန်းမာရေး ဝန်ကြီးဌာနက ဘယ်လိုပဲစာတွေထုတ်ထုတ်ကျန်တဲ့ဝန်ကြီးဌာနတွေက […]
နှီးဘုရား ပငျ့ဆောငျလာစဉျ လမျးခုလပျတှငျ တှဲကားနှငျ့ညိသဖွငျ့ လမျးဘေးသို့ ဆှဲခသြျောလဲရှဘေီ့းတဈလုံးသာ ခြိုငျ့ထဲကပြွီး လမျးပျေါသို့ အံဩစှာ ပွနျရောကျလာခဲ့သညျ။ကားကို စဈ ကွညျ့တော့ ဒီလို လကျယာတှနေဲ့ တှနျးတငျပေးခွငျး ခံရသလိုလို နှီးဘုရား ပင့်ဆောင်လာစဉ် လမ်းခုလပ်တွင် တွဲကားနှင့်ညိသဖြင့် လမ်းဘေးသို့ ဆွဲချသော်လဲရှေ့ဘီးတစ်လုံးသာ ချိုင့်ထဲကျပြီး လမ်းပေါ်သို့ အံဩစွာ […]
ယနေ့ တပေါင်းလပြည့်နေ့သည် ကျေးဇူးတော်ရှင် ဆရာတော်ဘုရားကြီးနှစ်ပါးမွေးနေ့ဖြစ်ပါသည်။ ကျေးဇူးတော်ရှင် သီတဂူဆရာတော်ဘုရားကြီးသည် သက်တော်(၈၃)နှစ်ပြည့်၍ ကျေးဇူးတော်ရှင် ပါ‌ချုပ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးသည် သက်တော်(၈၀)ပြည့် ဖြစ်ပါသည်။ ကျေးဇူးတော်ရှင် ဆရာတော်ဘုရားကြီးနှစ်ပါး ကျန်းမာချမ်းသာစွာဖြင့် သာသနာတော်အကျိုး ဘာသာအကျိုးတို့ကို ဆောင်ရွက်နိုင်ကြပါစေဘုရား.. ပြန်လည်မျှဝေပူဇော်ပါသည် Unicode ယနေ့ တပေါငျးလပွညျ့နသေ့ညျ ကြေးဇူးတျောရှငျ ဆရာတျောဘုရားကွီးနှဈပါးမှေးနဖွေ့ဈပါသညျ။ ကြေးဇူးတျောရှငျ သီတဂူဆရာတျောဘုရားကွီးသညျ […]
အိမ်စာ လုပ်နေတဲ့ သမီးငယ်လေးကို သူကိုယ်တိုင် သတ်မိလို့ အရူးတစ်ပိုင်း ဖြစ်သွားတဲ့ မိခင်ရဲ့ အဖြစ် ….
ကလေးတွေကို ရိုက်နှက်ဆုံးမတဲ့အခါမှာ သတိထားရပါမယ်…ကလေးတွေဟာ အလွန်နုနယ်သူတွေ ဖြစ်တာမို့ အန္တရာယ်ရှိတဲ့နေရာတွေကို ရိုက်နှက်မိရင် ကလေးအတွက် အသက်အန္တရာယ်ထိပါ ကြုံရနိုင်တာပါ….. မရိုက်သင့်တဲ့ နေရာ ရိုက်ခံရလို့ အသက်ပေးသွားရတဲ့ ကလေးလေးရဲ့ အကြောင်းလေးကို မိဘတွေ ဆင်ခြင်နိုင်အောင် ဖော်ပြလိုက်ရပါတယ်… တရုတ်နိုင်ငံက Shaanix ပြည်နယ်ရှိ မူလတန်းကျောင်းတစ်ခုမှာ ပညာသင်ကြားနေတဲ့ ရှစ်နှစ်အရွယ် […]
၁၃ နစ်နဲ့ မိသားစုတာဝန် တစ်ခုလုံးကို ထမ်းရွက်နေရပါလား ညီလေးရာ
ဘဝတွေဆိုတာ တကယ့်ကိုမလွယ်ကူတာပါ သုံးမကုန်အောင်ချမ်းသာတဲ့ သူတွေရှိသလို ကုန်းကောက်စရာမရှိအောင် ဆင်းရဲတဲ့သူတွေလည်း အများကြီးပါ။ တစ်ချို့ဆိုဘဝကို ရွေးချယ်ခွင့်ဘာမှမရှိပဲ ကံဇာတ်ဆရာရဲ့ အလိုကျလိုက်ကနေကြရတာပါ။အလိုကျလိုက်ကနေကြရတာပါ။ အရွယ်နဲ့တောင်မမျှကြပါဘူး အသက်ငယ်ငယ်နဲ့ ကျောင်းနေခွင့်မရတော့ပဲ ရွေးချယ်ခွင့် ငြင်းပယ်ခွင်မရှိတဲ့ လောကပင်လယ်ပြင်ကြီးထဲမှာ ကူးခက်နေကြရတာပါ။ တကယ်တော့ သူဖြသ်ချင်ခဲ့တာက စစ်ဗိုလ်ကြီး ခုလုပ်နေရတာက အသက်၁၃နှစ်နဲ့တောင်မမျှတဲ့ ဆိုက်ကားဆရာ ဘာဓံစေ့ကောက်ပြီးရောင်းရတဲ့သူ… […]
ယောဂီရောင်မြန်မာဝတ်စုံလေးနဲ့ ပွဲသို့ တက်‌ရောက်ခဲ့ပါတယ်။အလှူအတန်းဆို လက်မနှေးတတ်တဲ့ သရုပ်ဆောင် နန္ဒာလှိုင်က ဒီနေ့မှာ နိုင်ငံတော်က ချီးမြှင့်တဲ့ သီရိသုဓမ္မသိင်္ဂီ ဘွဲ့တံဆိပ်ကို ရရှိခဲ့ပါတယ်။ ပရိသတ်တွေရဲ့ အားပေးချစ်ခင်မှုကို အခိုင်အမာရရှိထားတဲ့ မင်းသမီးချောလေး နန္ဒာလှိုင်ကတော့ ဒီနေ့(မတ်လ၈ရက်)မှာ နိုင်ငံတော် အစိုးရက ချီးမြှင့်တဲ့ သီရိသုဓမ္မသိင်္ဂီ ဘွဲ့တံဆိပ်ကို ရရှိခဲ့ပါတယ်။ အလှူအတန်းတွေမှာ […]
ဖားကန့်ပြည်သူ့ဆေးရုံက ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် စောင့်ကြည့်လူနာ အမျိုးသမီး ဆေးရုံမှ ထွက်ပြေး ….
တရုတ်နိုင်ငံ ရွှေလီမြို့ကနေပြန်လာတဲ့ အမျိုးသမီးတဦးကို ဖားကန့်မြို့ ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးမှာ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် စောင့်ကြည့်လူနာအဖြစ် သီးသန့်ထားဖို့ ပြင်ဆင်ရာမှ မတ် ၇ ရက်နေ့ မွန်းလွဲနှစ်နာရီခွဲအချိန်က ထွက်ပြေးသွားခဲ့တယ်လို့ ဖားကန့်မြို့နယ် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးရုံးက ပြောပါတယ်။ ထွက်ပြေးသွားသူဟာ ဖားကန့်မြို့နယ် လုံးခင်းကျေးရွာအုပ်စု အပိုင်း ၃ မှာ နေထိုင်သူ ၂၅ […]
ယနေ့ သဲကုန်းကျေးရွာ မီးလောင်မှုဖြစ်ပွားရာ လူနေအိမ် (၁၆) လုံးမီးလောင်သွား ….
သဲကုန်းကျေးရွာ ဘုန်းကြီးလမ်း မီးလောင်မှုဖြစ်ပွားရာ လူနေအိမ် (၁၆) လုံးမီးလောင်သွား ပေါင်မြို့နယ် သဲကုန်းကျေးရွာ ဘုန်းကြီးလမ်းရှိလူနေအိမ်(၁၆)လုံး ယနေ့ နေ့လည်အချိန်ခန့်က မီးလောင်ခဲ့ပါသည်။ ကိုဖြိုးငယ်+မဘိုမ တို့နေအိမ်မှ စတင် လောင်ကျွမ်းခဲ့သော မီးမှာ ပတ်ဝန်းကျင်နေအိမ် (၁၅)လုံးသို့ကူးစက် လောင်ကျွမ်းသွားပြီး ဒေသခံပြည်သူများ သဲကုန်းမီးသတ်ကားတို့မှ ဝိုင်းဝန်းငြိမ်းသတ်ကြပြီး ပေါင်မြို့နယ်မီးသတ်ဦးစီးမှ မီးသတ်ကားတို့ဖြင့် […]
” ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ် သားကောင်းသမီးမြတ် ရရှိစေသော ဂါထာတော် ”
သားကောင်းသားမြတ် ရစေသော ဂါထာ (ပဋိသန္ဓေတည်နေစဉ် ရွတ်ဆိုရန်) ယော မေ အယံ ဘန္တေ ကု စ္ဆိတော ကုမာရကော ဝါ ကုမာရိကာ ဝါ၊သော ဘဂဝန္တံ သရဏံ ဂစ္ဆတိ ဓမ္မဉ္စ ဘိက္ခု သံဃဉ္စ၊ ဥပါသကံ တံ ဘဂဝါ ဓာရေတု […]